How will Asia Prepare for Recovery? | Travel Destination Update
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Editorial • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Ahoana no hiomanana amin'ny fanarenana an'i Azia?
Ahoana no hiomanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny i Azia
Home » Lahatsoratra » Toerana fitsangatsanganana » Ahoana no hiomanana amin'ny fanarenana an'i Azia?
Ahoana no fomba hanombohana amin'ny fomba mahomby ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, ny indostria izay mampiasa mpiasa 1 amin'ny 10 manerantany? Ity dia mpiasa iray izay efa nopotehin'ny areti-mandringana COVID-19. Ahoana no hiomananan'i Azia fanarenana?
Araka ny World Travel & Tourism Council (WTTC) ny fiatraikany mivantana sy mivantana sy ankolaka tamin'ny fitsangatsanganana tamin'ny taon-dasa tamin'ny taona 2019 izay:
Vola mitentina 8.9 tapitrisa dolara amerikana amin'ny harinkarena faobe manerantany
3% amin'ny GDP eran-tany
Asa 330 tapitrisa, asa 1 amin'ny 10 manerana an'izao tontolo izao
1.7 tapitrisa dolara amerikana fanondranana mpitsidika (6.8% amin'ny totalin'ny fanondranana, 28.3% amin'ny fanondranana serivisy manerantany)
Fampiasam-bola mitentina US $ 948 miliara (4.3% amin'ny fampiasam-bola tanteraka)
Ny fanarenana ny fizahantany no lohahevitra No.1 ary mijery sy mianatra ny sehatra rehetra amin'ny indostria misy antsika.
Ny habetsaky ny webinarà mipoitra miaraka amin'ny fanarenana sy ny adihevitra "dingana manaraka" dia porofon'ny hery sy fahalianana hiverina hiasa.
Fa mahasoa ve ny webinar? Tany am-piandohan'ity herinandro ity, ny mpanonta hajaina Don Ross (TTR Weekly) dia nanoso-kevitra fa matetika ny webinars dia latsaka amin'ny fahaiza-misaina tsara. “Koa satria ny areti-mandringana COVID-19 dia nandroaka anay rehetra hody tao anaty trano, dia tototry ny fampiroboroboana ho an'ireo tranonkala web izahay izay mampanantena ny hamindra ny indostrian'ny fizahan-tany hiverina avy eo amoron'ny lalana mankany amin'ny fenitra vaovao. Mampanantena ny hanoro antsika ny làlana mialoha ny safo-drano webinars, saingy matetika rehefa mirona amin'ny talkfests izahay dia manisy fatra ny antsipiriany. Izy ireo dia misoroka ny mazava sy mifantoka amin'ilay tsy manjavozavo, miahiahy aho fa manatrika tranonkala web manantena izahay fa manantena ireo manam-pahaizana fa afaka manome saina mahazatra taloha mba hanampiana antsika ho tafavoaka amin'ny tafio-drivotra ara-bola, ”hoy izy nanoratra.
Ny indostrian'ny fizahantany dia nahazo vahana be tamin'ny coronavirus, nametraka ny fatiantoka tamin'ny US $ 450 miliara. Ny viriosy dia nahatratra olona 3.48 tapitrisa maneran-tany farafaharatsiny ary namono olona maherin'ny 244,000. Toerana fitsangantsanganana an-tampony toa an'i Etazonia, Espana, Italia ary Frantsa no anisan'ny firenena mitondra aretina betsaka indrindra.
Handeha handeha ihany ny olona raha mahatsapa izy ireo fa azo antoka ny fanaovana izany - ity no nambaran'i Don Ross tsara indrindra rehefa nanoratra izy:
“Ao amin'ny tontolon'ny COVID-19, ny fahiratan-tsaina dia mibaiko fa handeha isika rehefa azo antoka izany ary rehefa manana ny vola fanampiny isika. Izay no tsy itenenanay amin'ny webinar. Manaparitaka ny banky ny areti-mandringana ho an'ny rehetra, fa ahoana kosa no hiantohana ny fiarovana antsika ara-pahasalamana hahafahana mamerina ny dia indray? ”
Ny fanarenana no ambony indrindra ao an-tsain'ny Skål International sy ny UNWTO. Ny Board of Affiliate Members, izay CEO an'ny Skål International, Daniela Otero, dia mpikambana, dia niresaka momba ny famolavolana ny valiny ho an'ny sehatry ny fizahan-tany, indrindra amin'ny dingana fanarenana ary inona no tokony hatao laharam-pahamehana horaisin'ireo governemanta. .
Efa mandeha ny asa ao amin'ny UNWTO amin'ny volavolan-dalàna voalohany ahafahana manangana protokol mihatra amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny indostria, ary manamarika fa rehefa avelan'ny governemanta dia ilaina ny mihetsika haingana miaraka amin'ny hetsika satria ny fizahantany dia anisan'ny indostria tena voa mafy noho ny COVID -19 sy ny vokany.
Ny UNWTO dia manombana ny fatiantoka ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena manerantany amin'ity taona ity dia mety hianjera hatramin'ny 30%.
Notsiahivin'ny UNWTO fa ny fizahantany dia mpamily fanarenana azo antoka aorian'ny krizy taloha, miteraka asa sy fidiram-bola. Fizahan-tany, hoy ny UNWTO,
"Manana tombony mivelatra malalaka izay nihoatra an'io sehatra io, taratry ny rojom-bidiny misy lanjany ara-toekarena sy ny dian-tongony lalina."
Manodidina ny 80% -n'ny orinasam-pizahantany rehetra dia orinasa kely sy salantsalany (SME), ary io sehatra io no nitarika ny fomba hanomezana asa sy fahafaha-manao hafa ho an'ny vehivavy, tanora sy vondrom-piarahamonina ambanivohitra ary ny fizahantany dia manana fahaiza-manao lehibe hamorona asa aorian'ny toe-javatra krizy.
Hatramin'ny nanombohan'ny krizy ankehitriny, ny UNWTO dia niasa akaiky niaraka tamin'ny World Health Organization (WHO) mba hitarika ny sehatra, namoaka tolo-kevitra lehibe ho an'ny mpitondra ambony sy ny mpizahatany tsirairay.
Ny fanarenana sy ny famerenana amin'ny laoniny dia tena miankina amin'ny fananganana ny rivotra isika. Raha vantany vao manomboka misidina indray ny kaompaniam-pitaterana dia afaka miverina ny indostria. Mandra-pahoviana no handraisana izany.
Ny filoha jeneralin'ny PATA Dr. Mario Hardy dia nilaza hoe: “Ny fanontaniana voalohany ao an-tsain'ny tsirairay dia ny hoe mandra-pahoviana isika vao ho sitrana? Tsy fanontaniana tsotra no valiny. ”
Azia, mino izy fa hanome ny fiakarana faratampony lehibe indrindra amin'ny dia any amin'ny faritr'i Azia Pasifika amin'ny 2021, raha ny tombana farany navoakan'ny PATA. Nilaza ny fikarohana nataon'izy ireo fa ny mpitsidika dia tokony hanatitra mpitsidika 610 tapitrisa amin'ny 2021 (338m eo ho eo isam-paritra). Ny fitomboan'ny totalin'ny fahatongavan'ny mpitsidika 4.3% raha oharina amin'ny 2019 (585m).
Ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpitsidika iraisampirenena (IVA) dia mety hiova arakaraka ny faritra misy azy, ary i Azia dia andrasana hiverina indray miaraka amin'ny taha ambony indrindra amin'ny taona 2019.
Nandritra ny vanim-potoana fanarenana andrasana amin'ny 2021, i Asia dia tokony hamokatra isa tonga betsaka, miverina amin'ny fahaverezan'ny mpitsidika 104 tapitrisa eo anelanelan'ny 2019 sy 2020 hitombo 5.6% ka hatramin'ny 338m amin'ny 2021 amin'ny taona 2019.
Tsy ho sambo tsotra daholo izany. Hiatrika fifaninanana eran'izao tontolo izao izahay ho an'ireo mpizahatany, sy ireo mpitsidika mahazatra - anisan'izany ireo avy any amin'ny tanibe China.
Ny filohan'ny Birao fizahan-tany ao Hong Kong, Pang Yiu-kai, dia nanamarika fa na dia sarotra aza ny maminavina ny fotoana hitrangan'ny indostria amin'ny areti-mifindra COVID-19, ny fihemorana miendrika V dia tsy azo atao manoloana ny fameperana any ampitan-dranomasina sy ny fampiatoana ny sidina.
Ny azony antoka dia nilaza fa ny tsena rehetra dia handany vola an-jatony tapitrisa, na an'arivony tapitrisa mihitsy aza, hanenjehana ireo mpizahatany satria nanaparitaka ny dia eran'izao tontolo izao ny areti-mandringana ka nandripaka ny indostria nanomboka ny volana febroary, hoy izy.
"Haverina havaozina ny tontolon'ny fizahan-tany, hisy ny ara-dalàna vaovao," hoy ny talen'ny fizahan-tany HK nandritra ny fihaonambe fanao isan-taona ho an'ireo mpandray anjara amin'ny indostrialy 1,500.
Nilaza ihany koa i Pang fa mifototra amin'ny famakafakana ny tsena, ny mpizahatany amin'ny tanibe sy ireo avy amin'ny tsena lavitra dia handeha an-trano aorian'ny fotoana hahafatesan'ny areti-mandringana. Hivadika ny onja.
"Ny fanarenana aorian'ny areti-mandringana dia mifanohitra amin'izany aorian'ny fipoahan'ny aretin'ny taovam-pisefoana mahery vaika (SARS) tamin'ny 2003," hoy izy.
“Tamin'ny 2003, ny valan'aretina SARS dia tany Hong Kong indrindra. Ho an'ny COVID-19, voakasik'izao tontolo izao ”, hoy i Pang.
Na dia nitohy tsikelikely nanerana ny sisintany aza ny hetsika ara-toekarena ary niverina niasa ny olona, ​​ny mpandeha an-tanety dia hanome lanja bebe kokoa ny fahasalamana sy ny natiora aorian'ny nigadra am-bolana, hoy i Pang nanaiky ny hevitray avy tamin'i Don Ross.
"Rehefa misafidy toeran-kaleha amin'ny dia ho avy izy ireo dia hahatsapa ny vidiny ary hanome tombony ireo izay mety hitera-doza ambany amin'ny fahasalamana," hoy izy. "Nihena ny tsenan'ny MICE any amin'ny tanibe ary notazonina tamin'ny Internet na nahemotra ny hetsika."
"Japoney, Koreana ary Taiwanese, rezionaly, tanora ary antonony no be zotom-po indrindra fa mila lavitra mandritra ny fotoana lavitra noho ny teritery ara-bola sy fialantsasatra," hoy izy.
Elaela vao ho sitrana ny dia lavitra, ary mety tsy hiverina intsony ny sehatra any Hong Kong raha tsy amin'ny telovolana farany amin'ity taona ity, hoy ihany izy.
Ny talen'ny mpanatanteraka Dane Cheng Ting-yat dia nilaza fa ny birao HK dia nanokana vola $ 400 tapitrisa (1.66 miliara baht) hanohanana ny indostria amin'ny alàlan'ny fomba fiasa telo.
Nandritra io fotoana io dia nanamboatra drafitra fanarenana ho dingana voalohany.
Ny fizahan-tany dia iray amin'ireo indostrialy efatra andry any Hong Kong, manome 4.5% ho an'ny vokatra anatiny eto amin'ity taona 2018 ity.
Andrew J. Wood dia teraka tao Yorkshire England, izy dia hotely matihanina, Skalleague ary mpanoratra mpanoratra. Andrew dia efa 40 taona mahery tamin'ny fandraisam-bahiny sy niainany. Nahazo diplaoma tao amin'ny hotely Napier University, Edinburgh izy. Andrew dia Talen'ny Skal International (SI) taloha, Filoham-pirenena SI Thailand ary filohan'ny SI Bangkok amin'izao fotoana izao ary VP an'ny SI Thailand sy SI Asia. Mpampianatra tsy tapaka ao amin'ny Oniversite isan-karazany any Thailand izy, ao anatin'izany ny Sekolim-pankasitrahana amin'ny oniversite Assuming sy ny Sekolin'ny Hotely Japan any Tokyo.